Kudzivirira Yako Online Persona | Martech Zone
Kudzivirira Yako Online Persona
Muvhuro, Kukadzi 25, 2008 Muvhuro, Kukadzi 25, 2008 Douglas Karr
Sezvo nyika iri digitized uye izwi roga roga raunotaura uye chiito chaunoita rinosungirwa kubatwa pavhidhiyo, zvakakosha kuti iwe uzviite mapurisa. Ichi chinhu chakakosha kumabhizinesi anoshuvira kuvhura yavo yekushambadzira kuyedza kublogging uye pasocial media.
Paunenge uchisangana newaunoshanda naye mumutambo we baseball uye kuvaita vachikuona uchiita ruzha uye kunwa yaisava nyaya hombe kare, online haina muganho pakati pehupenyu hwega nehwebhizinesi. Kana iwe uine yepamhepo persona, ndiwo mafungiro ako webasa futi. Mumwe munhu haakusiyanise iwe kubva kune webhusaiti yekufambidzana kuenda kune LinkedIn - iwe unongova 'online'.
Nhoroondo yepamhepo yatove Chishandiso Chevanhu
Vashandirwi vatove kushandisa Google kutsvaga uye kutsvagisa vashandi. Chinhu chekupedzisira chaunoda kusiya nzira, yako pachako kana bhizinesi, izvo zvinogona kukanganisa maitiro ako nekambani kana tarisiro inokuona iwe.
Makore mashoma apfuura, ini ndakashanda kukambani uko kwakasarudzika kusarongeka kwakatumirwa nemushandi uye kwaitenderera. Kunyangwe yanga isina chekuita nebasa remunhu, zvaionekwa muhofisi yevashandi vemaneja - mucherechedzo waive usingachinjiki uye waizokuvadza kugona kwemunhu iyeye kukwidziridzwa kana kutora mamwe mabasa mukati mesangano.
Ndanga ndichipedza nguva ndiri Seesmic, yekupedzisira, chishandiso chiri chemhando yemusanganiswa (uye kusangana) kwevhidhiyo uye taura. Imwe shamwari yakataura manheru ano kuti yaona zvimwe zvine chekuita nehunhu muvanhu hwavairemekedza neimwe nzira.
Dambudziko rakapetwa kaviri: Seesmic ingangoita chaiyo-nguva, saka vanhu vanotaurirana uye dzimwe nguva vanopinda mune nharo dzinopisa. Chimwe chikamu ndechekuti Seesmic inovhara musiyano uripo pakati pehunyanzvi nebhizinesi. Vamwe vanhu vanonwa pavanenge vachikurukura… vashoma vakatodhakwa. Vamwe vanhu vakaputika pamusoro pekukurukurirana pamusoro pechitendero uye / kana zvematongerwo enyika.
Nyika HAIYE Yakagadzirira
Chinhu chinoshamisa kuti tine tekinoroji yakaita seiyi apo munhu anogona kuburitsa mweya wake nekutaurirana zvinobudirira neshamwari pasi rese. Dambudziko nderekuti nyika haisati yagadzirira rudzi urwu rwekujeka parizvino. Chishandiso chakadai seSeesmic chinogona kupa toni yekuziva mukati memifungo yemunhu pabasa, hupenyu… uye nekupa imwe yekuisa pakudzikama kwavo.
Mumwe munhu, angave akambove mushandi akakwana, anogona kubviswa pamikana mushure mekunge maneja wekuhaya agara uye ongorora maawa ekukurukurirana kwavo pamhepo.
Kuchengetedza Maonero Ako
Pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita kuchengetedza yako Online Persona uye Mukurumbira:
Dzivisa kutaurirana kwakapihwa pabonde, chinamato, zvematongerwo enyika, nezvimwewo kwaunogona kuisa pfungwa dzinogona kusanzwisisika. Tora hurukuro idzodzo kunze kwenyika.
Dzivisa kuve pasi pesimba rechero mushonga kana doro online. Iwe hausi mukutonga kwemanzwiro ako nezviito.
Nguva dzose ramba uchifunga kuti zvese zvaurikuita zvinyorwa izvo Chikoro chako, Kushanda, Vatori venhau, Hurumende, uye kunyangwe Mhuri vane mukana wekuwana.
Kuderedza Njodzi uye Kubvisa Njodzi
Mamwe mapurogiramu, kunyangwe epamhepo, anopa kubviswa kwezvako zvemukati. Verenga iwo maSevhisi eSevhisi uye uone kana uchikwanisa kubvisa zvachose vhidhiyo, ruzha, nhoroondo, nezvimwe. Kana iwe ukambozviwana uri mumamiriro ezvinhu apo iwe wakakanganisa, ita nepaunogona napo kuti ubviswe. Nenzira, mikana yekuti iwe ubudirire yakanyanya, ishoma kwazvo.
Sanganisa. Kana iwe uine 1 hurukuro mu10 iyo inoratidza kuti iwe uri kufuridzira yako yepamusoro pane Zvematongerwo enyika, ita chokwadi chekubata inotevera anoteerera nhaurwa pasina kufuridza yako yepamusoro. Kupa zvakanakisa zvemukati zvemukati zvinodzora njodzi yezvinhu zvisina kunaka izvo munhu angawane. Zvekare, izvi hazvisi zvisina musoro, asi zvinogona kubatsira.
Funga! Zano rakanakisa ndere kusambopinda mumamiriro ezvinhu online iwe waunganyadziswe nawo gare gare. Ingo dzivisa aya mamiriro zvachose.
Ndine tarisiro yekuti rimwe zuva isu tichava nharaunda inonyanyo kushivirira (mis) maitiro, tichiziva kuti zvinhu zvakaipa zvinoitika kuvanhu vakanaka uye vanhu vakanaka vanokanganisa, futi. Asi kusvika panguva iyoyo, ita shuwa yekuchengeta ziso padhuze nezvekuti uri online persona inoonekwa sei.
Ini ndinofanira kuwedzera kuti iyi hurukuro yakafemerwa pamwe Chiremba Thomas Ho, uyo akabhurogwa pamusoro wenyaya wekugadzira online persona.
Yedu 2012 Super Bowl, Shanduro yechipiri!
Kukadzi 25, 2008 na2:48 PM
Isu tinomhanya munjodzi huru yekupinda mudambudziko kana isu totanga kufunga maererano ne "personas" ingave pairi kana kunze kwemutsara. Zvazvinoreva ndezvekuti hatisi isu pachedu uye tiri kuvanza chimwe chinhu nemaune kana kunyepedzera kunge tisiri.
Kufunga kwakadaro kunogona kuve nengozi nekuti vanhu vane tsika yekudzikisira mhedzisiro kana vachifunga kuti havazivikanwe.
Doug ini zvakare ndinofunga wanga uri kubata kwakafara kwechiratidzo mune chimwe chezvirevo zvako zviri pamusoro. Wedzera izwi rimwe chete uye ndinewe.
Chinhu chekupedzisira chaunoda kusiya nzira, yako kana bhizinesi, inogona [zvakaipa] zvinokanganisa kuti kambani yako kana tarisiro ichakuona sei iwe.
Chokwadi ndinovimba kuti tarisiro chido be zvakanaka zvakakanganiswa nemaitiro angu epamhepo. Icho chikamu chezvandiri uye kukosha kwandinounza patafura.
Uye nguva dzose ndinofungidzira kuti Amai & mushandirwi wemangwana vachange vachitarisa chero chandinoisa online. Izvi zvinondibatsira kuzvidzora uye kusiya zvinhu zvakapusa.
Kukadzi 25, 2008 na3:08 PM
Mhinduro yakanaka, Chris!
Ini handibvumirane neruremekedzo kuti kuva neinternet persona kuvanza kana kunyepedzera.
Kana ndikaenda kumusangano ndiine tarisiro, ndinoveura ndebvu uye ndinopfeka sutu. Everyday kubasa ndinopfeka khaki nekugera mazuva mashoma. Ndiri munzira kuenda kumba ndinogona kurovera simbi mumota, asi kana ndikatyaira vatengi, handisi kuzokanda mu AC/DC.
Iniwo ndine njere dzekutsvinya dzinogona kutsamwisa vamwe dzimwe nguva. Kana ndiine vandinoshanda navo kana vandinotarisira, ini handiwanzoratidza pfungwa yekuseka nekuti vazhinji vanogona kuzviona zvisina kukodzera.
Muzviitiko zvese, handisi kusatendeseka kana kuvanza zvechokwadi ini. Ndiri kungoratidza 'divi rangu repamusoro' kana 'divi rakakodzera'. Ndichiri ini (vimbi neni - ndiri pachena kune mhosva), asi zvakakosha kana ndichida kusvika kune vakawanda uye kuwana ruremekedzo rwevanhu.
Pfungwa yangu ndechimwe chinhu chatingabvumirana pachiri - nyika haisati yagadzirira rudzi urwu rwekubuda pachena. Ndinoshuva kuti dai zvadaro - ipapo ndaigona kupfeka makaki, kwete kuveura, uye kukwenya "For those About to Rock" nevamwe vangu mumotokari.
Izvo hazvisi kuitika chero nguva, munguva pfupi, zvakadaro.
Kukadzi 25, 2008 na5:25 PM
Ndinewe ikoko, Doug. Ndinoimba ndichienderana neredhiyo nemahwindo up!
Chinhu chimwe chete kuti munhu akagara panomira mwenje padivi pangu afunge kuti ndingangoita zvehupenzi kuridza mhere. Asi chimwe chinhu kuratidza kuti ndiri ini nekudzikisa mahwindo!